Akụkọ - Ihe dị iche n’agbata skru na bolts yana ọdịiche dị n’agbata skru na bolts
Banyere DD Fasteners
HEX Isi Onwe Mmanụ Ala
Igwe igwe anaghị agba nchara
Ọkpụkpụ Omenala Pụrụ Iche
Ọdịiche dị n'etiti kposara na bolts na ọdịmma ọrụ dị n'etiti kposara na bolts
E nwere ọdịiche abụọ n’etiti bolts na skru:
1. Ekwesịrị iji bolts n'ogwekọ na mkpụrụ. Enwere ike ịsa skru ozugbo na matriks nke usoro dị n'ime;
2. Bolts kwesịrị ka ejiri oghere dị larịị kpochie ma kpọchie ya, ike mkpuchi mkpọchi ahụ pere mpe.
I nwekwara ike ile uzo na isi n’isi.
Na isi enwere akwa nwere ike ikpebi ka nnukwu kposara na eriri ọdụ, dị ka: otu okwu, obe ụzọ, hexagon dị, wdg, ma e wezụga maka hexagon mpụta;
Kposara nwere isi mpụga nke achọrọ ịwụnye site na ịgbado ọkụ, ụzọ riveting na ụzọ nrụnye ndị ọzọ dị na kposara;
Akara ịkpụ akpụ bụ nke ịpị ezé, ezé osisi, ezé atọchi mkpọchi nke skru;
Threadkpụrụ ndị ọzọ dị na mpụta so na bolts.
Ọrụ dị n'etiti skru na bolts
1. Ihe eji emechi aru nwere ihe abuo, isi na ihe nkedo (cylinder ya na mpụga mpụga), nke a ga-ekwekọ na akụ maka imechi ma jikọta akụkụ abụọ site na oghere. A na-akpọ ụdị ụdị njikọ a. Ọ bụrụ n ’ipuchighị ihe ahụ n’ime bootu ahụ, a ga-ekewa akụkụ abụọ ahụ, yabụ njikọ bolt bụ nke njikọ a na-ewepu.
2. A na-eji ihe nkedo igwe ahụ maka njikọ njikọ dị n'etiti akụkụ nwere oghere na eri ahụ yana akụkụ nwere oghere n'ime. Nnukwu aku na uba a na achoghi achota udiri a (a na - akpo udiri ihe a ka a na - acho skru a kwa bu njikọ a na - emebi emebi; ọnọdụ dị n'etiti akụkụ abụọ.
3. scme onwe onwe ya: ihe yiri skru igwe, mana eri dị na skị bụ nke skru ịpị onwe pụrụ iche. A na-eji ya maka ịbọchi ma jikọta mmadụ abụọ dị mkpa iji mee ka ọ bụrụ ihe zuru oke. E kwesịrị ime oghere n’ime ndị otu ahụ tupu oge eruo. N'ihi nnukwu ekweghị ekwe nke kposara, enwere ike inyocha ha ozugbo n'ime oghere ndị otu ahụ wee mepụta eriri dị n'ime oghere ndị otu ahụ.
4. kposara osisi: dịkwa ka skid igwe, mana eri dị na ịghasa ahụ bụ nke ịghasa osisi pụrụ iche, enwere ike ịfecha ya na onye otu osisi (ma ọ bụ akụkụ) maka itinye eriri akụkụ (ma ọ bụ nke na-abụghị nke). Site na oghere nye onye otu osisi. Typedị njikọ a bụ nke mbughari.
Oge nzipu ozi: Jun-28-2020
Southwest Industrial Development Mpaghara, mpaghara Yongnian, Handan, Hebei, China.